बुटवलबाट ६ जनाको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइयो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
लकडाउनले स्वाब पठाउन समस्या भएपनि डब्लूएचओसँगको सहकार्यमा गाडीबाट स्वाब पठाइएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका फोकलपर्सन डा. सुदर्शन थापाले बताए।
उक्त अस्पतालमा अर्घाखाँचीका २, दाङका १ र रुपन्देहीका ३ गरी छ जनालाई धागो कारखानामा रहेको अस्थायी आईसोलोसन अस्पतालमा राखिएको उनले जनाए।
साथै डा. थापाले अहिलेसम्म पनि स्वास्थ्यकर्मीले पर्याप्त आवश्यक सामाग्री नपाउँदा स्वास्थ्य जोखिम बढेको बताए।
‘जिम्मेवारी एकातिर, डर एकातिर, अप्ठ्यारोमा छौं,’ उनले भने, ‘थोरै मात्रामा पीपीई आउँदा एकैपटकको प्रयोगमा सकिएको छ।’ स्वास्थ्यकर्मीलाई यो अवस्थाले त्रसित बनाएको उनले बताए।
विभागका अनुसार उपभोत्ताले आफ्नो गुनासो पैसा नलाग्ने फोन नम्बर (११३७) तथा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर पनि पनि उजुरी गर्न सकिन्छ।
यस्तै, भाइबर (९८५११८०९५९), इमो, स्काइप, एसएमएस मार्फत गुनासो/उजुरी गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।
विभागले यसअघि टोल फ्रि नम्बर ११३७ बाट मात्रै गुनासो सुनुवाई गर्दे आएको थियो। टोल फ्रि नम्बरमा सबै भन्दा बढी ग्यास नपाएको उजुरी परेको थियो।